ကော့ကေးဆပ် Ovcharka ခွေးမွေးမြူရေးအချက်အလက်နှင့်အမေးအဖြေများ - Breeds
ကော့ကေးဆပ် Ovcharka ခွေးမွေးမြူရေးအချက်အလက်နှင့်အမေးအဖြေများ
ဤဖောက်ခွဲမှုသည်အာဏာပိုင်များက၎င်း၏မယုံနိုင်လောက်အောင်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောဝက်ဝံရုပ်ပုံပန်းသဏ္notာန်သာမကမြင့်မားသောဘက်စုံသုံးမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကော့ကေးဆပ် Ovtcharka, ငါတို့ယနေ့သိသည်အတိုင်း, အရှိဆုံး fit ၏ရှင်သန်မှု၏ဒါဝင်ရဲ့သီအိုရီမှသက်သေအထောက်အထားပါ!
ကော့ကေးဆပ် Ovtcharka ကဘာလဲ?
ကော့ကေးဆပ် Ovtcharka သည်အလုပ်အဖွဲ့တွင်ပါ ၀ င်သည် Molosser ၏မူလမျိုးရိုးဖြစ်သည်။ ဤကြီးမားသောယေဘုယျအားဖြင့်ကြမ်းတမ်းသောအင်္ကျီဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောခွေးတစ်ကောင်ကိုတိဗက် Mastiff မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်သည်ဟုလူအများကယူဆကြသည်။ သို့သော်လက်ရှိရှေးဟောင်းသုတေသနသက်သေအထောက်အထားများမဟုတ်ရင်အကြံပြုထားသည်။
ကော့ကေးဆပ်ပြည်နယ်၏ဝေးလံခေါင်သီသောဒေသများတွင်အခြေချနေထိုင်သောလူမျိုးစုများသည်သူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောခွေးများကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးကြံ့ခိုင်ပြီးအသိဉာဏ်ရှိသောကော့ကေးဆပ် Ovtcharka သို့ပြင်ပမှဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအနည်းငယ်သာဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါမျိုးစိတ်မူရင်းဒေသနှင့်ခွေးများ၏မူလရည်ရွယ်ချက်ကနေနှစ် ဦး စလုံး၎င်း၏အမည်ကိုယူ။
ကော့ကေးဆပ်သည်ဂျော်ဂျီယာ၊ အာမေးနီးယား၊ အဇာဘိုင်ဂျန်၊ ဒါဂတ်စတန်၊ အီရန်နှင့်တူရကီတို့ပါဝင်သောကော့ကေးဆပ်ဒေသများကိုရည်ညွှန်းသည်။ ရုရှားစကားလုံး Ovtcharka သည် Shepherd သို့မဟုတ် Sheepdog သို့ဘာသာပြန်သည်။
ဝိုင်၊ ဝက်ဝံ၊ သူခိုးစသည့်တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်မရောထွေးရန်အမှန်မှာမွေးမြူရေးအုပ်ထိန်းသူဖြစ်ပြီးမွေးမြူရေးသားကောင်များကိုထိထိရောက်ရောက်ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။
ရာစုနှစ်များစွာကြာပြီးနောက်ထိုမျိုးကွဲသည်ဝေးလံခေါင်ဖျားသောဒေသများအပြင်အနည်းငယ်သာသိပြီးဥရောပခွေးပြပွဲများတွင် ၁၉၃၀ ခုနှစ်တွင်ဂျာမနီ၌ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင်မျိုးစိတ်ကိုကွဲပြားသောအမျိုးအစားနှစ်မျိုးခွဲခြားခဲ့သည် - တောင်တန်းဒေသမှပိုလေးပြီးပိုကြီးမားသောခွေးများဖြစ်သော Transcaucasian Ovtcharka၊ နှင့်ကော့ကေးဆပ် Ovtcharka, ပိုမိုပေါ့ပါးတည်ဆောက်စတက်လွင်ပြင်ဒေသများ၏ခွေး။
၁၉၇၆ ခုနှစ်တွင်ထိုအမျိုးအစားနှစ်မျိုးသည်စံသတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီရန်မျှော်လင့်ထားသည့်ခွေးများအားလုံးနှင့်တစ်မျိုးတည်းခွဲခြားထားသည်။ သို့သော်မျိုးစိတ်တစ်မျိုးစီကိုယခင်ကဆိုဗီယက်ယူနီယံ၏ဒေသတစ်ခုစီတွင်မျိုးကွဲများအပါအ ၀ င်ဒေသအမျိုးအစားအလိုက်ခွဲခြားနိုင်သည်။
ယနေ့အကောင်းဆုံးနမူနာများကို“ ဂျော်ဂျီယာ” အမျိုးအစားဟုယူဆကြပြီးဝက်ဝံနှင့်တူသည်ဟုမကြာခဏပြောလေ့ရှိသည့်လေးလံသော၊ လေးလံသောအင်္ကျီအမျိုးအစားဖြစ်သည်။
ကော့ကေးဆပ်လူမျိုးများသည်၎င်း၏သဘာ ၀ ရင်းမြစ်များထက် ကျော်လွန်၍ အသေးစိတ်ကျသောသမိုင်းကြောင်းရှိသည်။ မျိုးဆက်များ၏အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ခြေကိုသိမြင်သောကြောင့်ဆိုဗီယက်စစ်တပ်သည်ကော့ကေးဆပ်လူမျိုးများအား ၀ န်ဆောင်ခွေးအဖြစ်ခေါ်ယူခဲ့သည်။ ၎င်းသည်စစ်ပွဲနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးကာလများတွင်အစောင့်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။
စစ်တပ်နှင့်စက်မှုဆိုင်ရာအသုံးပြုမှုအတွက်မျိုးပွားခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ခြင်းသည်ခေတ်သစ်ခွေးများမှဆင်းသက်လာသည့်ကျော်ကြားသော“ Red Star Kennels” ၏တာဝန်ဖြစ်လာသည်။
ကော့ကေးဆပ်လူမျိုးများသည်အနောက်နိုင်ငံများတွင်တဖြည်းဖြည်းလူသိများလာသည်နှင့်အမျှမျိုးပွားခြင်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေခြင်းအတွက်ဂုဏ်သတင်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ မျိုးပွားခြင်းသည် ၀ န်ဆောင်မှုခွေး၊ မိသားစုအဖော် / အုပ်ထိန်းသူနှင့်သိုးအုပ်အုပ်ထိန်းသူအတွက်သင့်လျော်သောအခြေအနေများတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင်အဖြစ်လူသိများ ရုရှားဝက်ဝံခွေး ပုံမှန် Ovcharka အမျိုးသားသည်ညှိုးနွမ်းသောနေရာများတွင် ၂၅/၂ မှ ၃၀ + လက်မမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုရပ်သင့်ပြီး ၁၀၀ + ပေါင်အလေးချိန်ရှိသင့်သည်။ အမျိုးသမီးများသည်နည်းနည်းပိုသေးသည်၊ ၈၀ ပေါင်နှင့်အနိမ့်ဆုံး ၂၄/၂ လက်မဖြစ်သည်။
အစိုင်အခဲအနက်ရောင်နှင့်အစိုင်အခဲအညိုရောင်၊ အနက်ရောင်နှင့်အညိုရောင်တို့၏ပေါင်းစပ်မှုမှအပအားလုံးအရောင်များ။ အများအားဖြင့်တွေ့ရခဲသောမီးခိုးရောင်အမျိုးမျိုး။ အခြားအရောင်များမှာသံချေး၊ ကောက်ရိုး၊ အဝါ၊ အဖြူ၊
၎င်းတို့သည်မိသားစု ၀ င်အားလုံးနှင့်ကောင်းမွန်စွာပြုမူဆက်ဆံသင့်သည်၊ သို့သော်သူစိမ်းများကိုသဘာဝအတိုင်းသတိထားသင့်သည်။ သိုးတော်စုအုပ်ထိန်းသူများစွာထက်စိတ်ကျေနပ်မှုရရန်စိတ်အားထက်သန်သော်လည်းဂျာမန်သိုးထိန်းခွေး (သို့) ရွှေပြန်လည်ရယူသည့်မျိုးစိတ်များကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာလေ့ကျင့်ထားသောမျိုးစိတ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းတို့သည် လွတ်လပ်၍ ခေါင်းမာမာဖြစ်နေနိုင်သည်။
မတူကွဲပြားသောလူများနှင့်အခြေအနေများနှင့်အညီလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်အစောပိုင်းအရွယ်တွင်ကော့ကေးဆပ်ကို“ ပေါင်းသင်း” ရန်အရေးကြီးသည်။ သင်သည်သင်၏ကော့ကေးဆပ်ကိုသိုးအုပ်ထိန်းသူအလုပ်အတွက်အသုံးပြုရန်စီစဉ်ထားပါက၎င်းတို့ကိုမွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်များထံအမြန်ဆုံးစတင်ဖော်ထုတ်ရန်အရေးကြီးသည်။ သင့်တင့်သောလူမှုရေးနှင့်လေ့ကျင့်မှုဖြင့်သင့်တွင်ပြproblemsနာအနည်းငယ်ရှိသင့်သည်။
ဟုတ်တယ်။ ကော့ကေးဆပ်လူမျိုးအများစုသည်သူတို့သိသည့်ကလေးများနှင့်ကောင်းသောဖြစ်ပြီး၊ သို့သျောလညျးကန ဦး ကနေသငျ့လျြောသော pecking အမိန့်ကိုတည်ထောင်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်, ကော့ကေးဆပ်ကကလေးများပတ်ပတ်လည်ကလေးများတွန်းအားပေးလို့မရပါဘူးနားလည်စေရန်။
၄ င်းတို့သည်ခွေးကြီးများဖြစ်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံသူတို့၏အရွယ်အစားကိုမေ့သွားသည်ကိုသိရှိရန်လည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်ကလေးတစ် ဦး ကိုမတော်တဆရိုက်နှက်ခံရခြင်းသို့မဟုတ်နင်းမိခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သည်။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကဲ့သို့ပင်ကော့ကေးဆပ်နှင့်ကစားသောအခါကလေးငယ်များကိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြီးကြပ်ရန်အရေးကြီးသည်။
ထို့အပြင်ခွေးတစ်ကောင်သည်သူတို့၏သိုးအုပ်များကိုကာကွယ်ရန်မွေးမြူထားသောကြောင့်ကော့ကေးဆပ်လူမျိုးများသည်မိသားစုကို၎င်း၏သိုးစုအဖြစ်အစားထိုး။ သူစိမ်းများသို့မဟုတ်အခြားခြိမ်းခြောက်မှုများကိုကလေးများနှင့်ဝေးဝေးရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။ တက်ကြွသောလူမှုရေးဘဝရှိအသက်ကြီးသောကလေးများသည်သူတို့၏သူငယ်ချင်းများသည်ခွေးများကိုနှစ်သက်ကြသော်လည်း dog ည့်သည်တိုင်းနှင့်ခွေးသည်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံခြင်းသည်မသင့်တော်ကြောင်းနားလည်ရန်လိုအပ်သည်
ကော့ကေးဆပ်လူမျိုးအများစုသည်အခြားခွေးများ၊ ကြောင်များ၊ သင့်တွင်အခြားအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များရှိပါကခွေးတစ်ကောင်ကိုရခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ကောင်းပြီ၊ ဒါကမင်းဆိုလိုတာကပေါ်မူတည်တယ်။ သင့်မှာအဖိုးတန်။ ကျိုးပဲ့လွယ်သောပစ္စည်းများများစွာပါသောယူနန်ပြည်နယ်ရှိအိမ်တစ်လုံးရှိပါကသင်နှစ်ကြိမ်စဉ်းစားရန်လိုအပ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင့်တွင်ဖုန်စုပ်စက်ကောင်းလျှင်သင်မှကြည်လင်ပြတ်သားသောလမ်းကိုလမ်းလွှဲ။ စွန့်စားခန်းတစ်ခုအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား၊ ဟုတ်သည်ထက်ကော့ကေးဆပ်လူမျိုးသည်အိမ်မွေးခွေးကောင်းတစ်ကောင်ဖြစ်နိုင်သည်။
ခွေးများနှင့်လူငယ်များအားလုံးဝါးခြင်းနှင့်သေတ္တာလေ့ကျင့်ခြင်းဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သင်နှင့်သင်၏ခွေးအတွက်များစွာအကျိုးရှိနိုင်သည်။ သင့်ရဲ့မျိုးပွားသူ၊ နည်းပြသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံရှိခွေးပိုင်ရှင်များနှင့်ပြောဆိုပြီးသေတ္တာကိုအသုံးပြုခြင်း၏တန်ဖိုးနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုပါ။
ကော့ကေးဆပ်လူမျိုးများသည်ပုံမှန်နှင့်ပုံမှန်သင်တန်းများအတွက်ကောင်းစွာတုံ့ပြန်ကြသည်။ ကော့ကေးဆပ်လူမျိုးများသည်အခြားခွေးများနှင့်အလွန်ကွာခြားသည်မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းတို့သည်ခွေးကြီးများဖြစ်ပြီးပြproblemsနာများသို့မဟုတ်စိန်ခေါ်မှုများသည် ပို၍ ကြီးမားနိုင်သည်ကိုသင်ဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်ပါ။
ဥပမာအားဖြင့်သင်သည်သင်၏ခွေး၏သေတ္တာသည်မီးဖိုချောင်စားပွဲထက်ပိုကြီးကြောင်းတွေ့ရှိနိုင်သည်။ အဝတ်အစားနှင့်ပရိဘောဂများအတွက်ဆံပင်ကိုဖယ်ရှားပေးသောကုမ္ပဏီတွင်သင်လည်းစတော့ရှယ်ယာ ၀ ယ်လိုသည်။
အရွယ်အစားကြီးမားပြီးပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်လိုအပ်သော်လည်း၊ ယေဘူယျအားဖြင့်လှည့်ပတ်နေသည့်အနေဖြင့် CO's သည်အလွန်ကောင်းသောအိမ်သို့မဟုတ်တိုက်ခန်းခွေးများကိုပြုလုပ်သည်။ သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအဆင့်သေးငယ်တဲ့သားပေါက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အတော်လေးနိမ့်သည်။
မွေးမြူရေးအစောင့်အရှောက်များကဲ့သို့ပင် CO သည်ယေဘုယျအားဖြင့်ယုတ်ညံ့။ လှုပ်ရှားမှုအဆင့်နိမ့်သောခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်သည်။ မူလကသူတို့သည်သိုးများနှင့်တစ်ညလုံးအိပ်ရန်၊ သားကောင်တွေကိုအများဆုံးညဥ့်အခါဖြစ်သကဲ့သို့, သင်သည်သင်၏ CO ညအချိန်တွင်ပိုပြီးတက်ကြွတွေ့လိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ခွေးကိုအိမ်အပြင်ဘက်တွင်ထားရန်စီစဉ်နေပါကသူတို့သည်၎င်းတို့သည်နှိုးစက်များဖြစ်ကြောင်းသတိထားရမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ပိုင်နက်နယ်မြေအတွင်းကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောမည်သည့်အရာကိုမဆိုသတိပေးလိမ့်မည်။ သူတို့ရဲ့လှည့်စားနေတဲ့ထုံးစံအတိုင်းလှည့်စားနေပုံပေါက်တာကိုမလှည့်စားပါနဲ့။ နည်းနည်းနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းကသူတို့ကိုနှိုးဆွပေးပြီး COS အများစုသည်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်မြန်ဆန်သွက်လက်လှသည်။
သူတို့ကဆံပင်နည်းနည်းလေးနဲ့တစ်ချိန်လုံးဆံပင်ကျွတ်နေပေမဲ့တစ်နှစ်မှာအနည်းဆုံးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ 'ထိုးနှက်အင်္ကျီ' အများစုဟာ။ ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါဆံပင်တွေကြီးတွေနေရာတကာမှာရှိတယ်။ ထွန်ခြစ်နှင့်ဖြီးထွက်ပြီးအလုပ်သွားပါ။
သင့်လျော်စွာဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်ရှုပ်ထွေးမှုကိုလျော့နည်းစေပြီးထိုအမွေးကိုကယ်တင်နိုင်သည်။ CO သားမွေးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအဝတ်အထည်သည် ၀ တ်ဆင်သူအားကံကောင်းခြင်းနှင့်သက်တမ်းရှည်စေခြင်းဟုဆိုသည်။
သူတို့ရဲ့အရွယ်အစားအဘို့သူတို့သည်လွယ်ကူသောဂိုးသမားဖြစ်ကြသည်။ ကြီးထွားလာနေသောခွေးပေါက်စသို့မဟုတ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်သို့မဟုတ်နို့တိုက်နေသောခွေးများသည်တစ်နေ့လျှင်ခွက် ၈-၁၀ ခွက်လောက်စားနိုင်သော်လည်းစိတ်ဖိစီးမှုမရှိသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူခွေးသည်များများစားစားမစားနိုင်ပါ။ သင်၏ CO သည်လိုအပ်သောအစာအာဟာရကိုထောက်ပံ့ပေးသောအရည်အသွေးမြင့်အစားအစာကိုကျွေးမွေးသင့်သည်။
သူတို့အကြံပြုသောအရာကိုကြည့်ရှုရန်သင်၏မျိုးဆက်နှင့်အတူစစ်ဆေးပါ။ အချို့သောမျိုးဆက်များသည်အစားအစာကိုချက်ပြုတ်ထားသောအသား၊ ဒိန်ချဉ်၊ ဆိတ်နို့စသည်တို့ဖြင့်ဖြည့်စွက်ထားသည်။ ငယ်ရွယ်သောကလေးငယ်များသည်တစ်နေ့လျှင် ၂-၃ ကြိမ်၊ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများမှာတစ်နေ့လျှင် ၂ ကြိမ်ရှိသည်။
COS သည်ရာသီဥတုအခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင်ကောင်းမွန်သည်။ သူတို့သည်ရာသီဥတုနှင့်ဆီးနှင်းများကိုလုံးဝနှစ်သက်ကြသည်။ ပုံမှန်အခြေအနေများတွင်ကောင်းမွန်သောခွေးတစ်ကောင်နှင့်အိပ်ရာခင်း။ အိမ်များလုံလောက်ပါသည်။ သူတို့သည်လုံလောက်သောအရိပ်နှင့်ရေတို့ဖြင့်ညီမျှသောအပူကိုညီမျှစွာခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
အမှတ်ဤသည်မှာကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ နားစိုက်ခင်းသည်ရိုးရာအစဉ်အလာဖြစ်သည် (သိုးအုပ်အုပ်ထိန်းသူအနေဖြင့်ခွေးများသည်ကိုက်ခဲရန်နားရွက်များမရှိပါကခွေးများသည်အားသာချက်ရှိသော်လည်းပြပွဲခွေးများအတွက်ပင်မလိုအပ်ပါ။ ) နားကိုဖြတ်တောက်ခြင်းသည်ပိုမိုနှစ်သက်သော်လည်းဥရောပနိုင်ငံများစွာသည်လူသားဆန်သောအကြောင်းများကြောင့်သီးနှံစိုက်ပျိုးခြင်းကိုတားမြစ်ထားသည်။
သင်၏ခွေးကလေးအသက်ကြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်“ Puppy Kindergarten” ကိုအထူးအကြံပြုလိုပါသည် (ဒေသခံနာခံမှုသို့မဟုတ် breed club ကိုဆက်သွယ်ပါရန်ရှာဖွေရန်) နှင့်အခြေခံနာခံမှုအတန်းနောက်တွင်လိုက်သည်။ ကော့ကေးဆပ်လူမျိုးများသည်အပြုသဘောဆောင်သောအားဖြည့်သင်တန်းများကိုကောင်းစွာတုန့်ပြန်ကြပြီးတိုတို၊
ဖောက်များနှင့် All- ဖောက်ကလပ်များမှတစ်ဆင့်ကော့ကေးဆပ်လူမျိုးများသည်အဖော်ခွေး (သို့) ပိုမိုအဆင့်မြင့်သောဘွဲ့များအတွက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည်။ ဤတိုင်းပြည်ရှိကော့ကေးဆပ်လူမျိုးများပြီးမြောက်အောင်မြင်ခဲ့သည့် AKC'S Canine Good Citizen title ရရှိရန်ခွေးအမျိုးအစားကြီးများကိုတိုက်တွန်းသည်။
ကော့ကေးဆပ်လူမျိုးများအနေဖြင့်နာခံမှုလေ့ကျင့်မှုသည် ၈ ကြိမ်ပြုလုပ်ရန်တစ်ပတ်လျှင် ၁ နာရီမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ထာဝရဖြစ်သည်ကိုမှတ်မိရန်အထူးအရေးကြီးသည်။
မွေးမြူခြင်းကိစ္စကိုသင်မစဉ်းစားမီမျိုးပွားသူအားပြproblemsနာများ၊ မထင်မှတ်သောအန္တရာယ်များ၊ ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်နှလုံးရောဂါများအကြောင်းပြောဆိုပြီးသင်၏ခွေးကိုတတ်ကျွမ်းနားလည်သောပုဂ္ဂိုလ်များမှသင့်လျော်စွာအကဲဖြတ်ပါ။ ခွေးကြီးတွေရဲ့မျိုးပွားမှုကိုသင်အရင်ကလုပ်ဖူးပါသလား။
ဒါဟာသင်ထင်သကဲ့သို့အလိုအလျောက်မဟုတ်ဘူး! သင်လိုအပ်သောကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကိုပေးချေရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ ကိုယ်ဝန်မတိုင်မီစစ်ဆေးခြင်းလား။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခွေးကိုစောင့်နေတာလား လိုအပ်လျှင် cesarean အပိုင်းအတွက်သင်ငွေပေးလိုပါသလား။ ခွေးသေလျှင်အဘယ်သို့? သင်အမှိုက်သရိုက်ကြီးများကိုအရင်မကျွေးခဲ့ဖူးပါသလော။
သငျသညျအမေသူတို့အပေါ်မှာလှိမ့်မထားဘူးသေချာစေရန်နေ့တိုင်းအမှိုက်သရိုက်များ 24 နာရီစောင့်ကြည့်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား သင်၏အိမ်သို့လာရန် VET တန်းစီထားသလား။ ပိုက်ဆံပေးချင်ပါသလား ၈ ပတ်ကြာသူငယ်များကိုသင်မရောင်းနိုင်လျှင်ကော။
ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းနှင့်ပါးစပ်အပိုများကိုသင်ဆက်လက်ပေးချေနိုင်မလား။ အကယ်၍ သင်သည်သူတို့ကိုချက်ချင်းမရောင်းနိုင်လျှင်၊ အိုးအိမ်၊ အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ခြင်း၊ လူမှုရေးနှင့်လေ့ကျင့်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကော။ ပြည့်စုံရန်အတွက်မည်သည့်ခွေးမဆိုမိခင်သို့မဟုတ်ဖခင်တစ် ဦး ဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
သင်သည်၎င်းကိုသင်၏ခွေးကိုပြသခြင်းသို့မဟုတ်အသိပညာရှိသောလူတစ် ဦး ထက်ပိုသောအကဲဖြတ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုသက်သေပြခဲ့သည်။
သင်၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာငွေရှာရန်သို့မဟုတ်သင်၏ဝယ်ယူမှုစျေးနှုန်းသို့မဟုတ်ကုန်ကျစရိတ်ကိုပြန်လည်ရယူရန်ဖြစ်လျှင်သင်၏ခွေးကိုမမွေးဖွားသင့်ပါ။ မွေးမြူရေးကိုမှန်ကန်စွာလုပ်သောအခါ, သင်ဖြစ်စေပြီးမြောက်လိမ့်မည်သံသယဖြစ်ပါတယ်။ ခွေးမွေးမြူခြင်းဟာပေါ့ပေါ့တန်တန်အကျိုးဆောင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ သင့်ခွေးကိုမမွေးမီဒေသခံတိရိစ္ဆာန်အမိုးအကာသို့ သွားရောက်၍ ၀ န်ထမ်းများနှင့်စကားပြောပါ။
သူတို့တင်ပါးဆုံရိုး dysplasia ရသလား။
ကော့ကေးဆပ်လူမျိုးများသည်မည်သည့်ကြီးကျယ်သောမျိုးနွယ်များကဲ့သို့ပင်တင်ပါးဆိုးရွားသောရောဂါလက္ခဏာများကိုခံစားနိုင်သည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူခွေးများသည်ရောဂါလက္ခဏာများအတွက်ဓာတ်မှန်ရိုက်သင့်သည်။ တိရစ္ဆာန်များအတွက်အရိုးအထူးကုဖောင်ဒေးရှင်း (OFA) သည်လက်ခံနိုင်သောတင်ပါးနှင့်ခွေးများကိုနံပါတ်များထုတ်ပေးသည်။
ခွေးတစ်ကောင်ကို ၀ ယ်သည့်အခါ x-rayed stock ကိုအသုံးပြုသောမျိုးဆက်များကိုအမြဲရှာပါ။ OFA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များသို့မဟုတ်အသိအမှတ်ပြုကုသမှုခံမည့်သူထံမှစာများကြည့်ရှုရန်ပြောပါ။ နာမည်ကြီးသောမျိုးဆက်များသည်သူတို့၏ကလေးများကိုတင်ပါးဆုံရိုးရောဂါနှင့်အခြားပြင်းထန်သောမျိုးရိုးဗီဇချို့ယွင်းမှုများမှအာမခံပေးလိမ့်မည်။
ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ သိသင့်သောအထူးအကြံဥာဏ်များသို့မဟုတ်ပြissuesနာများရှိပါသလား။
ဒီအရေးအသား (1995) ၏အဖြစ်ကော့ကေးဆပ်အနည်းငယ်မျိုးရိုးဗီဇဆက်စပ်ကျန်းမာရေးပြproblemsနာများရှိသည်ဖို့ပုံရသည်။ ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, တင်ပါးဆုံရိုး dysplasia အချို့စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ပါတယ်။ FCI နှင့်ရုရှားမျိုးဆက်များတွင်မျက်စိရောဂါ၊ မျက်စိအတွင်းတိမ်နှင့်အောက်ပိုင်းမျက်ခွံချို့တဲ့ခြင်းအကြောင်းဖော်ပြထားသည်။
CO'S လူတိုင်းအတွက်ခွေးမဟုတ်ပါ။ ဘာလို့မဖြစ်ရမလဲ? သူတို့သည်အချိန်၊ အာရုံစိုက်မှု၊ လေ့ကျင့်မှုနှင့်ကိုင်တွယ်မှုမကြာခဏလိုအပ်သည်။ သူတို့ဟာသန်မာပြီးတမင်တကာရှိပြီးလူတိုင်းကိုကြိုက်လိမ့်မယ်လို့မမျှော်လင့်နိုင်ပါ။
သင့်လျော်သောလေ့ကျင့်မှုမရှိပါကသူတို့သည်လူနှင့်ခွေးများကိုအလွန်ရန်လိုနိုင်သည်။ သူတို့ကအများကြီးဟောင်ပါဘူးနှင့်ဆံပင်တွေအများကြီးရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်ခိုင်မာသော၊ တည်ငြိမ်ပြီးတသမတ်တည်းလေ့ကျင့်မှုလိုအပ်သည်။ CO သည်အခြေအနေအားလုံး၌သင်လိုချင်သလိုမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းတုံ့ပြန်ရန်ယုံကြည်စိတ်ချရန်အမူအကျင့်ကောင်းများကိုကောင်းစွာသင်ယူရန်လိုအပ်သည်။
ခွေးကြီးတစ်ကောင်သည်ကြီးထွားလာသည့်ခွေးတစ်ကောင်ကိုကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းကိုခြိမ်းခြောက်သည့်အခြေအနေများတွင်ပင်ကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်းသင်သိလျှင်၎င်းသည်ခွေးတစ်ကောင်အား၎င်း၏သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးပြုစုပျိုးထောင်နိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်သောအချိန်၊ ခွန်အား၊ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ငွေများကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။ ကော့ကေးဆပ်ကိုစဉ်းစားပါ။
အများအားဖြင့်ယောက်ျားများသည်များသောအားဖြင့်ပိုများသည်။ အရွယ်အစားသေးငယ်သောကြောင့်အမျိုးသမီးများအိမ်ထဲတွင်အနည်းငယ်ပိုမိုလွယ်ကူနိုင်သည်။ အမျိုးသမီးများသည်များသောအားဖြင့်လွှမ်းမိုးမှုနည်းပါးပြီးကလေးများနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
သင့်အတွက်အဖြေမှာသင်ကကော့ကေးဆပ်လူမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ သင်၌အိမ်၌အခြားခွေးအထီးများရှိသလား၊ သို့မဟုတ်အခြားသိုးအုပ်အုပ်ထိန်းသူများသို့မဟုတ်ကြီးမားသောလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသောမျိုးဆက်များနှင့်အတူအတွေ့အကြုံရှိခြင်းအပေါ်တွင်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုအပေါ်မူတည်သည်။
ငါခွေးကလေး (သို့) ခွေးအဟောင်းရသင့်သလား။
“ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အရည်အသွေး” နှင့်“ အရည်အသွေးပြ” ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
၎င်း၏ပြသနိုင်သည့်အလားအလာကိုဆုံးဖြတ်ရန်အတွက်ခွေးတစ်ကောင်ချင်းစီကို၎င်း၏ breed standard နှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်။ အရည်အချင်းမပြည့်မှီသောအမှားများကိုဖော်ပြသည့်ခွေးတစ်ကောင်သို့မဟုတ်ခွေးကလေးကိုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အရည်အသွေးအဖြစ်သတ်မှတ်မည်။ တစ်ခါတစ်ရံအမှားများကိုအသိပညာရှိသူသာမြင်နိုင်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံအမှားအလွန်မြင်နိုင်သည်။
ပြသအရည်အသွေးကဆိုလိုတာကခွေးမှာဖောက်ခွဲမှုစံသတ်မှတ်ချက်အရကြီးလေးတဲ့အမှားတွေမရှိပါဘူး။ ဤသည်စိတ်ထားကောင်းသောဖြစ်လိမ့်မယ်, ခွေးအစဉ်အဆက်ပြပွဲမှာအနိုင်ရလိမ့်မည်, ဒါမှမဟုတ်ချန်ပီယံဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုမဆိုလိုပါ။
အကယ်၍ သင်သည်ပြသအရည်အသွေးအရည်အသွေးကိုပေးဆပ်ပါက၊ ခွေးကလေးသည်အရည်အချင်းမပြည့်မှီသောအမှား (သို့) အခြားချွတ်ယွင်းချက်သို့မဟုတ်ရောဂါဖြစ်ပေါ်လာပါကခွေးပေါက်စကိုအစားထိုးမည်သို့မဟုတ် ၀ ယ်ယူသည့်ဈေးနှုန်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုပြန်လည်ပေးမည်ဟုစာဖြင့်ရေးသားထားသောအာမခံချက်ရှိသင့်သည်။
Show quality သည်အရွယ်ရောက်ပြီးသောခွေးတစ်ကောင်တွင်အကဲဖြတ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ အကယ်၍ သင်၏နှလုံးသည်ခွေးတစ်ကောင်တည်းကိုသာတပ်ဆင်ထားပါက၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အရည်အသွေးသည်ရှင်းလင်းပြီးသားအရွယ်ရောက်ပြီးသောလူကြီးတစ် ဦး ကို ၀ ယ်ရန် ပို၍ ပျော်ရွှင်လိမ့်မည်။
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အရည်အသွေးခွေးများကိုခွေးကွင်း၌မပြနိုင်ပါ။ သို့သော်သူတို့သည်နာခံခြင်း၊ သွက်လက်ခြင်းနှင့်အသင့်တော်ဆုံးသောတိရိစ္ဆာန်များသို့မဟုတ်မိသားစုအုပ်ထိန်းသူများ၌ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ဤခွေးများကိုမွေးမြူခြင်းမပြုသင့်ပါ။ သူတို့၏အမှားများကိုသူတို့၏သားစဉ်မြေးဆက်များသို့လက်ဆင့်ကမ်းပေးနိုင်သည့်အတွက်ကြားခံသင့်သည်။ မျိုးဆက်အများစုသည်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အရည်အသွေးပြည့်ခွေးများကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်းအကန့်အသတ်ဖြင့်သာဖြစ်စေ၊
အများအားဖြင့်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အရည်အသွေးခွေးများသည်စျေးနှုန်းချိုသာသောဝယ်ယူမှုစျေးနှုန်းရှိသည်။ ခွေးရဲ့စွမ်းရည်တွေ၊ ဒါမှမဟုတ်လိုအပ်တဲ့အချိန်၊ လေ့ကျင့်မှု၊ ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ဂရုစိုက်မှုတို့မှာခြားနားမှုမရှိသင့်ဘူး။
မိဘတစ် ဦး သို့မဟုတ်နှစ် ဦး စလုံးချန်ပီယံအဆင့်အတန်းရှိမရှိအပါအဝင်ကော့ကေးဆပ်တစ် ဦး ၏ကုန်ကျစရိတ်သည်အချက်များစွာအပေါ်မူတည်သည်။ တိရိစ္ဆာန်ကိုအမေရိကန်မွေးမြူသို့မဟုတ်တင်သွင်းဖြစ်စေမ; နှင့်ကျန်းမာရေးနှင့်တင်ပါးအာမခံရှိမရှိ။
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အရည်အသွေးခွေးကလေးသည်ဒေါ်လာ ၅၀၀.၀၀ မှ ၁၀၀၀.၀၀ အထိရှိသည်။ အရည်အသွေးပြည့်ဝတဲ့ခွေးပေါက်စတွေကိုယေဘုယျအားဖြင့်ဒေါ်လာ ၈၀၀.၀၀ နှင့်အထက်ကုန်ကျသည်။ တင်သွင်းသောခွေးများသည်ပိုမိုကုန်ကျနိုင်သည်။ ခွေးအဟောင်းများကိုခွေး၏အရည်အသွေးပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်ချန်ပီယံဆုရရှိခဲ့ခြင်းသို့မဟုတ်နာခံခြင်းလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းရှိမရှိပေါ် မူတည်၍ ပိုမိုမြင့်မားသော (သို့) စျေးနှုန်းနိမ့်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချနိုင်သည်။
နည်းတစ်နည်းမှာရှားရှားပါးပါးဝတ်ရုံပြပွဲတစ်ခုကိုသွားပြီးပြသသူများ၊ CO's'S ပိုင်ရှင်များနှင့်စကားပြောရန်ဖြစ်သည်။ အမျိုးမျိုးသောခွေးစာပေစာတမ်းများသည်မျိုးဆက်များသို့မဟုတ်ကလပ်များကိုစာရင်းပြုသည်။ ရှားပါးဖောက်အဖွဲ့အစည်းများသည်မကြာခဏမျိုးဆက်လွှဲပြောင်း ၀ န်ဆောင်မှုများရှိသည်။
မျိုးဆက်တစ် ဦး သည်ဂုဏ်သိက္ခာရှိပါကမည်သို့သိနိုင်သနည်း။
အခြေအနေများကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်စတင်ပါ။ အဆိုပါခွေးနှင့်သူမ၏ခွေးကျန်းမာပုံပေါ်ပါသလား မေးခွန်းများစွာမေးပါ။ မျိုးပွားသူသည်ခွေးများကိုမွေးမြူခြင်း၊ သူတို့ဘယ်ခွေးကလပ်တွေပါလဲ။
သူတို့ကဘယ်လောက်ကြာကော့ကေးဆပ်ရှိခဲ့သလဲ ဘယ်နှစ်ယောက်ခွေးတစ်ကောင်ချင်းစီပိုင်ဆိုင်ကြသလဲ။ သူတို့မှာခွေးပေါက်စတွေဘယ်လောက်များများရနိုင်သလဲ ကိုးကားချက်များတောင်းရန်သေချာစေပါ။ သင်လိုချင်သောအရာကိုရရန်စောင့်ဆိုင်းစာရင်းတစ်ခုတွင်သင်ရရန်မျှော်လင့်နိုင်သည်။
မျိုးပွားသူသည်တောင်းဆိုထားသည့်ခေါင်းစဉ်များအားလုံးကိုသက်သေပြနိုင်ပြီး X-rays အထောက်အထားကိုလည်းသေချာအောင်စစ်ဆေးပါ။ ယုတ္တိနည်းအရခွေးများနှင့်တူသောအရာများကိုသိမ်းဆည်းထားသောသို့မဟုတ်နှစ်စဉ်အမှိုက်သရိုက်များများပြားသောလူတို့ကိုသတိပြုပါ။
မျိုးပွားသူသည်သင်၌ရှိသကဲ့သို့သင်ကဲ့သို့စိတ်ဝင်စားပြီးမေးခွန်းများစွာမေးသင့်သည်။ အနာဂတ်မွေးမြူရေးကတိကဝတ်များနှင့်ရှုပ်ထွေးသည့်ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်မှုစာချုပ်များကိုသတိပြုပါ။ သင်ဖတ်ပြီးသောနားလည်သဘောပေါက်သောရေးသားထားသောစာချုပ်ကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။
သငျသညျခွေးပြပွဲမှဖူးဘူးဆိုရင်, သင်သွားရပေမည်! ၎င်းသည်ခွေးတစ်ကောင်နှင့်အရွယ်အစား၊ ဖော်ပြချက်များ၊ ခွေးနှင့်ဆက်စပ်သောအရာအားလုံးကိုရောင်းချသည့်ရောင်းချသူများနှင့်သူတို့၏စိတ်အားထက်သန်မှုကိုခံစားနေရသောခွေးများနှင့်အတူခွေးတစ်ကောင်ကိုနှစ်သက်သည့်ပရဒိသုဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်ရုပ်မြင်သံကြားမှ Westminster ခွေးများကိုပြသသည်ဆိုပါက၎င်းသည်အကောင်းဆုံးခွေးများ၊ ကိုင်တွယ်သူများနှင့်တရားသူကြီးများနှင့်အတူ dogdom ၏“ စူပါဖလား” ဖြစ်သည်ကိုသင်သဘောပေါက်ရမည်။
သို့သော်ပျမ်းမျှခွေးပြပွဲသည်သာမန်ထက်မကပေ။ သင် bug ကိုကိုက်နိုင်သည်ဟုသင်ထင်လျှင်သင်၏မျိုးပွားသူနှင့်စကားပြောပါ၊ သင်၏inရိယာတွင် breed handling class ကိုရှာပါ။ ဒီနေရာတွင်သင့်လျော်သောလက်စွပ်နည်းစနစ်ကိုလေ့လာလိမ့်မည်။
သင့်ရဲ့ခွေးကိုပြခြင်းသည်သင်နှင့်မိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက်အလွန်ကောင်းသောဝါသနာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အခြား CO ပိုင်ရှင်များ၊ ခွေးနိူးများနှင့်တွေ့ဆုံရန်နှင့်ပျော်စရာများစွာရရှိရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ငါ AKC ခွေးပြပွဲမှာကော့ကေးဆပ်မမြင်ရသနည်း
ကော့ကေးဆပ်များသည် American Kennel Club မှအသိအမှတ်မပြုသောမျိုးဆက်များစွာထဲမှတစ်ခုသာဖြစ်သည်။
သိုးအုပ်ထိန်းသူများအမျိုးအစားများစွာရှိပြီးစိုက်ပျိုးရေးယဉ်ကျေးမှုရှိသောနိုင်ငံအများစုတွင်ခွေးများသည်သမိုင်းတစ်လျှောက်တိရစ္ဆာန်မွေးမြူသူများဖြစ်သည်။ Great Pyrenees, Kuvasz နှင့် Komondor ကဲ့သို့သောလူကြိုက်များသောမျိုးစိတ်အချို့ကို AKC မှအသိအမှတ်ပြုသည်။
သို့သော်၊ သိုးတော်စုအုပ်ထိန်းသူအများစုကိုယူအက်စ်တွင်“ ရှားပါးသောမျိုးပွားများ” အဖြစ်သတ်မှတ်ကြသည်။ ကော့ကေးဆပ်အိုဗာချာကာအပြင်အခြားသိုးစုပုံမျိုးများဖြစ်သော Maremma Abruzzi, Anatolian Shepherd Dog နှင့် Sharplaninatz တို့ဖြစ်သည်။
အချို့သည်အခြားသူများထက် ပိုမို၍ ရှားပါးသော်လည်းဤမျိုးပွားများအားလုံးကိုစင်ကြယ်သောသားများဟုသတ်မှတ်သည်။ နိုင်ငံတိုင်းတွင်မျိုးရိုးဗီဇကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည့်၊ မှတ်တမ်းစာအုပ်များထားရှိပြီးပြပွဲများကိုစီစဉ်ပေးသောမှတ်ပုံတင်ဌာနအမျိုးမျိုးရှိသည်။
လောလောဆယ်ကော့ကေးဆပ်လူမျိုးများနှင့်အခြားရှားပါးသောသိုးအုပ်အုပ်ထိန်းသူများကိုအမေရိကန် Rare Breed Association (ARBA) ပြပွဲများတွင်ပြသနိုင်သည်။
ARBA ပြပွဲများအပြင်ကော့ကေးဆပ်လူမျိုးများကိုရှားရှားပါးပါးမျိုးစိတ်များပြသခြင်းနှင့်ရှားပါးသောမျိုးဆက်များကိုဖိတ်ကြားသည့်ပွဲစဉ်များတွင်ပြသနိုင်သည်။ ဤနေရာများအကြောင်းသင်၏မွေးမြူသူများ၊ စာပေအမျိုးမျိုးနှင့်အခြားရှားပါးမျိုးပွားသူများမှတစ်ဆင့်ရှာဖွေနိုင်သည်။
breed club သည်ရိုးသား။ ဘက်မလိုက်သောအချက်အလက်များကိုပေးလိမ့်မည်ဟုသင်မျှော်လင့်သင့်သည်။ သငျသညျကလပ်တိကျမှန်ကန်သောနှင့်မျှတသောမှတ်တမ်းများကိုစောင့်ရှောက်ရန်မျှော်လင့်သင့်ပါတယ်။ ဒါကဒီမိုကရေစီဖက်ရှင်ဖြင့် run လိမ့်မည်နှင့်လူတစ် ဦး ၏ရူပါရုံကိုသို့မဟုတ်ထင်မြင်ချက်များများအတွက် soapbox လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ဆိုလိုသည်မှာကော့ကေးဆပ် Ovtcharka တွင် FCI # 328 ဖြစ်သောကမ္ဘာ့စံချိန်ကိုမှီသည်။ ကလပ်အသင်းသည်ဖောက်သည်အားလုံးအတွက်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသင့်ပြီးသီးခြားအသင်းအဖွဲ့မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်တစ် ဦး ချင်းအတွက်ပွဲစား၊ တင်သွင်းသူ၊ ရှေ့တန်းမဟုတ်ပါ။
ဒါဟာဖောက်ခွဲကလပ်မှတဆင့်မှတ်ပုံတင်ထားသောခွေးတစ်ကောင်သို့မဟုတ်ခွေးတစ်မျိုးတည်းကိုသာအာမခံချက်မဟုတ်ပါဘူး။ တစ် ဦး ကကလပ်မှတ်ပုံတင်တစ် ဦး ချင်းစီခွေးစိတ်ထားသို့မဟုတ်အလှတရား၏စံချိန်စံညွှန်းများအတည်ပြုရန်မထားဘူး။ ၎င်းသည်သူသို့မဟုတ်သူမအတွက်လေ့လာရန်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်အပေါ်မူတည်သည်။
တစ် ဦး ဖောက်ကလပ်ဝင်ရောက်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကဘာတွေလဲ?
တစ် ဦး ကဖောက်ကလပ်တရားဝင်လုံးစာအုပ်စောင့်ရှောက်။ ၎င်းသည်ခွေးတစ်ကောင်ချင်းစီနှင့်ခွေးပေါက်ကောင်များ၏အမှိုက်များကိုမှတ်ပုံတင်သည်။ ၎င်းသည်ဖောက်သည်သတင်းအချက်အလက်နှင့်မျိုးဆက်များကိုရည်ညွှန်းပြီး၎င်းမှအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အခြားသူများအားမလိုမုန်းထားမှုများမရှိဘဲစုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်သည်။
ကလပ်မှပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးသည်ငွေကြေးကုန်ကျသည်။ ကလပ်သို့ဝင်ရောက်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ဤဝန်ဆောင်မှုများကိုထောက်ပံ့ရန်အတွက်ပေးဆောင်ရမည့်အခကြေးငွေများကိုပေးသည်။ ကလပ်သည်သင်၏ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုသာမကသင်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီများလည်းလိုအပ်သည်။
သင့်တွင်အချိန်နှင့်လိုချင်မှုရှိပါကသင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုစေတနာ့ဝန်ထမ်းပါ။ သင်အသင်းဝင်မပါလျှင်အသင်းသည်လုပ်ဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
Brindle Dog Breeds: လှပပြီးကျားအစင်း (၉) ကောင်စာရင်း
Goldendoodle မွေးမြူရေးသတင်းအချက်အလက်, temperament, ခွေးပေါက်စ & ရုပ်ပုံများ
mini australian သိုးထိန်းမျိုးစိတ်အချက်အလက်
havanese poodle ရောနှောကြီးထွားလာသည်